Madaxweyne Farmaajo Oo Maalinta Berri Booqanaya Jabuuti. | Awdalmedia.com
Madaxweyne Farmaajo Oo Maalinta Berri Booqanaya Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maalinta berri oo khamiis ah booqasho ku tagaya dalka Jabuuti, si uu u qaboojiyo xiisada ka dhalatay safarkii uu bishii hore ku tagay Eritrea.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Cabdinur Maxamed Axmed ayaa xaqiijiyay socdaalka Madaxweyne Farmaajo ku tagayo Jabuuti, isagoo tilmaamay in socdaalkiisa ay salka ku heyso xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha Gobolka ka jira.
Dowladda Jabuuti ayaa walaac ka muujisay hadalkii ka soo yeeray Madaxweyne Farmaajo intii uu ku guda jiray booqashadii uu bishii hore ku tagay Asmara, kaasoo ahaa in laga qaado cunaqabateynta saaran Eritrea.
Dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata mid u janjeersatay Isbaheysiga Eritrea iyo Ethiopia ee dhowaan xulafada la sameystay Imaaraadka iyo Sacuudiga.